Caddeyn muujineyso inuu Kheyre hormuud u yahay musuq maasuqa!
09 August, 2018 in Maqaallo by BANA Mogdishu Office
Sida ay Xukumadda sheegtay ama la arkay waxaa dhawaanhan socday dhaq dhaqaaq ay ku tilmaameen la dagaalanka musuq maasuqa! Hase ahaatee, u muuqda mid aan xaqiiqada ku saleysneyn.
Xukumadda Xassan Cali Kheyre waxa ay maanta shaqo ka joojin ku sameysay Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibedda oo ay maalmo kahor si aan wanaagsaneyn ciidamu gudaha wasaaradda ugula dhaqmeyn.
Sida la ogyahay waxaa muuqata in Mukhtaar Mahad lagu haysto musuq maasuq ay wasaaraddu beenisay, yeelkeede, ma aha mid dood laga keenayo in ay dowladdu xididdada u siibto musuq maasuqa lakiin waxaa jirta su’aal weyn oo ay tahay in laga jawaabo!, Xukumaddu maka dhabbaa la dagaalanka musuq maasuqa?
Waxaa muuqata in xukumadda aysan daacad ka ahayn la dagaalanka musuq maasuqa balse loo qaadan karo mid lagu marin habaabinayo dad weynaha.
Waxaa taas tusaale u ah isku shaandeyntii uu dhawaan golihiisa wasiiradda ku sameeyey RW Xassan Cali Kheyre oo ay ku caddahay in uu qaaday tallaabooyin ka so horjeeda sheegashadiisa ah la dagaalanka musuq maasuqa.
Talaabooyinkii yaabka lahaa ee uu qaaday ayaa ah in uu u wasaaradda kalluumeysiga u magacaabay Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isaga oo ku badalay Dr Cabdiraxman Maxamed Cabdi Xaashi oo wasaaraddaas shaqo aad u weyn ka qabtay mudaddii uu xilka hayey.
Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu ahaa wasiirka kaliya ee shahaadada PHD-da ka haystay xubnaha golaha wasiiradda marka laga yimaado Dr Cabdiraxmaan Bayle oo ah wasiirka maaliyadda.
Dr Cabdiraxman Cabdi Xaashi waxa uu soo nooleeyey wasaaradda kalluumeysiga isaga oo dib u qaabeyn aad u ballaaran ku sameeyey sidii ay u shaqeyn jirtay.
Maxaa lagu galay?
Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxa uu M/Puntland ka horistaagay ruqsooyin aan sharciga waafaqsaneyn oo ay siin jireen maraakiibta sida sharci daradda ah uga kalluumeysta badaha Soomaaliya, taas bedelkeeda waxa uu cadaadis kala kulmay Cabdi Wali Cali Gaas oo ku qasbay RW Kheyre in uu shaqada ka eryo.
Muxuu ku bedeshay?
RW Xassan Cali Kheyre waxa uu ceyrinta Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi isaga dajiyey culeyskii uga imaan lahaa Puntland kaddib markii uu ka gaabsaday in uu dhagax dhigo dekedda Garacad! Waana sababta ugu weyn ee uu ku bedelay wasiirka kuna magacaabay nin aan waligiis xil heerkaas oo kale ah qaban?
Hadaba, su’aasha is weydiinta mudan ayaa ah, Xassan Cali Kheyre Ma Musuq Maasuq Ayuu La Dagaalamayaa Mise Isagii Ayaa Horboodaya?
W/Q: Cabdi Geeseey.